Abavelisi bezixhobo ezincedisayo kunye nababoneleli - china izixhobo zecandelo lezinto ezincedisayo
Inkqubo yegumbi le-lVEN ecocekileyo ibonelela ngeenkonzo zenkqubo yonke egubungela uyilo, imveliso, ufakelo kunye nokugunyazisa ukucoca iiprojekthi zokucoceka komoya ngokungqinelana nemigangatho efanelekileyo kunye ne-ISO / GMP inkqubo esemgangathweni yamanye amazwe. Sisekele ulwakhiwo, ukuqinisekiswa komgangatho, isilingo sokulinga kunye namanye amasebe emveliso kunye nophando. Ke ngoko, sinako ukuhlangabezana nococeko, umoya opholileyo, inzalo, ukukhanya, umbane kunye nokuhombisa iimfuno kwiindawo ezahlukeneyo ezinjenge-aerospace, i-elektroniki, ikhemesti, ukhathalelo lwempilo, i-biotechnology, ukutya kwezempilo kunye nezithambiso
Esi sixhobo sinokusetyenziselwa amayeza, ukutya, ishishini lamachiza, ukugcinwa kwezinto ezingamanzi. Inenkangeleko entle, ukusebenza ngokulula, itanki inezixhobo ezizenzekelayo ezijikelezayo zokucoca intloko, ukuqinisekisa ukucoca ngokucokisekileyo, izixhobo ezisetyenzisiweyo ze-SUS304 okanye i-SUS316L, ngesipili esipolishwe okanye sonyangwa umphezulu matte, ukuhlangabezana nomgangatho we-GMP.
Inkqubo ye-AS / RS ihlala iqulethe iindawo ezininzi njengenkqubo yeRack, isoftware yeWMS, inqanaba lokusebenza kwenqanaba leWCS njl.
Yamkelwa ngokubanzi kwicandelo lemveliso zamayeza kunye nokutya.
Umatshini weAmpoule À iCoudre Led, Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina,